I-Eagle Lodge inokuhlobisa kwesimanjemanje nokusha okunamacebo ethonya laseScotland nempilo yezwe. Kufakwe isitayela kumaphephadonga we-Scion, ama-tartani athulisiwe futhi anqekuzise ikhanda emvelweni, uzozizwa usekhaya kakhulu lapha. Igumbi lokuphumula linethezekile ngosofa besikhumba kanye ne-suede kanye nesitofu sokhuni esivuthayo kusihlwa esithokomele. I-SMART TV inokubhalisele i-Netflix ne-Disney plus ukuze uthole ubusuku obupholile endaweni yakho yokulala ewubukhazikhazi e-Aviemore.
Uma ubheke ukujabulisa izivakashi ngenkathi uhlala ekhaya lakho leholide le-Aviemore, igumbi lokudlela liyindawo yokuzijabulisa efanelekile. Leli gumbi linempilo futhi lineminyango yesiFulentshi ezihlalweni zegumbi lokuphumula elingaphandle. Indawo ekahle yokuphakela umndeni wakho ukudla okukhethekile - okuhlala kuyingxenye ejabulisayo nezuzisayo ye-Highland self catering lodge. Ikhishi linazo zonke izinto zesimanje ezihlanganisa umshini wekhofi we-nespresso ukuze ujabulele ikhofi endaweni yokudlela yasekuseni engahlelekile.
Engadini, ubhavu oshisayo oyimfihlo uhlala ngaphansi kwe-canopy enkulu futhi ibhentshi lepikiniki yelogi elikhulukazi linikeza isikhala sokudlela okungakahleleki nge-BBQ - indlela ephelele yokusebenzisa iholide lakho le-Aviemore. Le ndawo yokulala enobungani bezinja inengadi engemuva ebiyelwe futhi yonke indawo yethu yokuhlala e-Aviemore iyingxenye yohlelo lokwamukela izilwane ezifuywayo lwaseScotland ukuze uqiniseke ngeholide elihambisana nezilwane ezifuywayo.
I-Eagle Lodge itholakala eduze komzila we-Aviemore orbital, ukuhamba kwezinja nezindlela zamabhayisikili kuyindawo nje yokulahla itshe. Uma ufuna indawo yokulala enobungani bomndeni, i-Eagle Lodge isendaweni enhle enamapaki okudlala ahlomele kahle aseduze kanye neluhlaza okotshani kwezemidlalo yangaphandle.
I-Eagle Lodge iyakwazi ukunikela ngamaviki agcwele ngoLwesihlanu kuya kuLwesihlanu noma uMsombuluko kuya uMsombuluko, kanti amanye amakhefu ngezimpelaviki ngolwesihlanu kuya kuMsombuluko, Maphakathi Neviki uMsombuluko kuya kuLwesihlanu.
Siyajabula ukukwamukela e-Eagle Lodge ngo-4 ntambama. Ukuhamba kuyadingeka ngo-10 ekuseni ngosuku lwakho lokuhamba.
Idiphozithi ebuyayo engu-£300 Yokuphuka/Yokulimala iyadingeka ngaphambi kokufika futhi ibuyiselwa ezinsukwini ezingu-7 ngemva kokuhamba.
Indawo yokuhlala kanokusho yangasese ene-Hot Tub, i-canopy enokukhanya kwe-LED imboza ubhavu oshisayo.
I-naia yokuhlala ngaphandle ngobusuku obubandayo.
Vala uhambe ungene edolobhaneni lase-Aviemore ukuvakashela izindawo zokudlela, izindawo zobumnandi nezinja nezitolo.
Indawo yokubeka ibhayisikili kanye nesitoreji sezemidlalo egaraji.
Ingadi engemuva ebiyelwe enocingo oluyizinyawo eziyisi-6.
Amakamelo okulala kanye namaBathroom
Amakamelo okulala atholakala esitezi sokuqala, kanye nendlu yokugezela yomndeni. Igumbi eliphindwe kabili eline-ensuite, elinye eliphindwe kabili, amakamelo amabili angamawele anegumbi lokugezela lomndeni. Yonke imibhede misha sha njengoba ishintshiwe ngoMeyi 2021.
Igumbi lokulala elikhulu linegumbi lokugezela le-en-suite. Isitayela esikhululekile siyaqhubeka futhi wonke amagumbi okulala anesitayela samaphephadonga e-Scion, ama-velvets amahle kanye nokuphonswa. Njengendawo yokulala ewubukhazikhazi uzojabulela ukusetshenziswa okunesizotha kwama-bathrobes nama-slippers ukuze wenze ukuhlala kwakho kujabulise kakhudlwana. Igumbi eliphindwe kabili eline-ensuite, elinye eliphindwe kabili, amakamelo amabili angamawele anegumbi lokugezela lomndeni.
I-Eagle Lodge iwulungele umndeni futhi kufakwe nesango lezitebhisi, izihlalo zabancane kanye nemihlahlandlela yemisebenzi yasendaweni Enobungane Bomndeni. Ingadi enkulu ibiyelwe.
Izilwane ezifuywayo nezinja zamukelekile
Izinja ezimbili eziziphethe kahle zamukelekile ngemali engu-£30 iyinye ngokuhlala. Sicela usithinte uma unezinja ezingaphezu kwezimbili. Ingadi ivaliwe.
Yini Okufakiwe endaweni yakho yokuhlala
Ukushisisa, Ugesi kanye ne-starter pack yamalogi
Wonke amalineni ombhede, amathawula athambile, izingubo zokugqoka kanye nama-slippers
Vakashela Ulwazi LweSkimu Sokwamukela saseScotland
Ukupaka izimoto ezi-3
I-Smart TV isegumbini lokuphumula, i-Netflix ne-Disney +
Isevisi yosizo yamahora angu-24.
Isakhiwo sangaphakathi - Indlu ingenwa ngomnyango ongaphambili, azikho izinyathelo, futhi iholela ephasishi. Iphasishi linomnyango wekhishi, i-WC kanye negumbi lokuhlala elihlukile. Igumbi lokudlela, igumbi lezinsiza kanye negaraji kutholwa ekhishini.